जर्नेल खत्रीलाई भेट्न घरमै जाँदै माला, यसरी हुँदैछ, माला र हेमको छिनोफानो (भिडियो हेर्नुस्) – " सुलभ खबर "
जर्नेल खत्रीलाई भेट्न घरमै जाँदै माला, यसरी हुँदैछ, माला र हेमको छिनोफानो (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । नक्कली सर्टिफिकेटको मुद्दामा निलम्बनमा परेका नेपाली सेनाका जर्नेल हेम खत्रीको दोस्रो पाटो पनि वाहिर आएको छ । उनले एक जना विवाहित महिलासंग १८ वर्ष अघि ज वरज स्ती विवाह गरेका थिए । माला नाम गरेकी विवाहित दुई सन्तानको आमालाई ज ब रज स्ती विवाह गरेका खत्रीले मालालाई यातना दिन थालेपछि यो कुरा बाहिर आएको हो । अहिले खत्री मालाको सम्पर्कमा पनि छैनन् । काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर खत्री मालासंग बस्दै आएका थिए ।
अहिले खत्रीले मालालाई आफ्नो श्रीमती होइन भनेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । माला र खत्री बसेकै घरमा बस्ने अर्को महिलाले उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा खुलाएकी छन् । हरिहरदेवी सादा नाम गरेकी अर्की महिला खत्री र मालाको कोठाको छिमेकी हुन् । उनी एउटै घरमा अर्को कोठामा बस्छिन् । ति महिलाले माला र खत्रीको सम्बन्धका बारेमा खुलाएकी हुन् ।
उनले हेम खत्री आएर रातोपुल स्थित कोठामा मालासंग संगै बसेको, श्रीमती हो भनेर सबैलाई चिनाउने गरेको बताइन् । भुईचालो गएको बेलामा पनि खत्री मालासंगै थिए । उनी छिमेकीसंग पालमा संगै थिए । विहान बेलुका संगै भेट्ने, संगै बसेर चिया खाना खाने गरेको पनि ति महिलाले बताएकी छन् ।
हेम खत्रीले कहिले काहीं मालालाई पिट्ने समेत गरेको उनले बताइन् । माला मिडियामा आएपछि पनि उनी कोठाको वरीपरी आउने तर कोठामा नआउने बताइन् । मैले कतिपटक यहाँ आएर खोलाको तिरमा आएर मालाको निगरानी गरेको देखेकी छु, ति महिलाले भनिन् अहिले होइन भनेर हुन्छ ? हामीले सबै देखेका छौं । उनीहरु श्रीमान र श्रीमती हुन् भन्ने प्रमाण हामी आफै हो । श्रीमान खत्री वि च ल्ली पारेर हराए पछि माला अब खत्रीकै घर जाने भएकी छन् । उनले मिडियामा रुँ दै भनिन्, आफ्नो श्रीमानको घरमा जाँदा मलाई कसले रोक्न सक्छ ? यदि म घरमा जाँदा श्रीमानले गो ली ठो क्छ न् भने ठो कुन् म उहाँकै हातवाट म र्न तयार छु ।